Naqshad casri ah oo diirran oo Duub ah Duvet Cover 3 Cadad Calan jilicsan oo jilicsan, Shiinaha Muusig casri ah oo diirran naqshadeynta Duvet Cover 3 Cadad u Deji Soo-saarayaasha Daboolka Jilicsan, Soo-saareyaasha, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Naqshad casri ah oo diirran oo Muuse ah Duvet Cover 3 Cadad Deji Dabool Raaxeeye jilicsan
Number Model: F29075
● Mashiinka ku dhaq biyo qabow oo leh midabbo, wareeg tartiib ah. Ma jiro waran caddeyn. Jiid qalalan hoose ama sudho si aad u qalajiso. Birta haddii loo baahdo.
EC Qurxinta Qurxinta Quruxda badan. Qaab-dhismeedka joomatari-qaab-dhismeedka casriga ah ee casriga ah ayaa ah lakabka casriga ah ee nabdoon ee kaamil ah ee u baahan sariirtaadu. Waxaan u adeegsanaa teknoolojiyada daabacaadda dhijitaalka ah ee ugu badan. Marka loo barbardhigo daabacaadda dhaqameed, qaabku wuxuu u yimaadaa si jilicsan, muuqaal ah, midabyaduna waa kuwo dhalaalaya oo ka nolol badan. Nidaamka daabacaadda iyo dheehida ee horumarsan wuxuu hubiyaa soonka midabka sare, yaraada, iyo u adkeysiga u adkeeya. Waxa ugufiican ugunafiican ee cusbooneysiinta qol jiif kasta.
Product Name Naqshad diirran oo diini ah oo Muuse ah Daboolka Duvet 3 Cadad U Daji Daboolka Naxariista Jilicsan
Kordhinta 100% Polyester Bedspread HF29034 Set Cover Cover